Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » Rajasthan na ndị njem na -eme omume ọjọọ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Rajasthan na mpụ ndị njem
Ugbua steeti bara ọgaranya njem nleta, Rajasthan dị n'India emeela ihe nwere nkwa dị ukwuu iji melite ma kwalite ahụmịhe ndị njem, maka onye njem na mba na mba.
Iwu ọhụrụ nwere ike inye aka nke ukwuu ichebe ndị njem site na mkpagbu na ahụmịhe ọjọọ mgbe ha na -ezumike na Rajasthan.
A ga -ahụzi omume na -adịghị mma n'ebe ndị njem nlegharị anya dị ka mpụ a ga -amata, mpụ.
Ọ bụrụ na mmadụ emee ụdị omume a, a ga -ejide onye omekome ahụ n'enweghị ohere ịgbapụta ya.
Steeti mgbago ugwu, nke na -enweta ndị ọbịa si n'ime obodo yana mba ofesi, ewepụtala iwu nke nwere ike inye aka nke ukwuu ichebe ndị njem site na mkpagbu na ahụmịhe ọjọọ mgbe ha na -ezumike.
A ga -ahụ omume ọ bụla na -eme ndị njem nlegharị anya ugbu a dị ka mmejọ a ga -amata, ọ bụrụ na emee ụdị omume a ugboro ugboro, a ga -ejide onye omekome ahụ n'enweghị ohere ịgbapụta ya.
Iji mezuo nke a, emeela ndezigharị wee webata ngalaba 27A na Azụmaahịa njem nlegharị anya Rajasthan, Iwu mmezi na iwu iwu 2010. Nke a gafere site na ịtụ vootu na Mgbakọ steeti. Ndị isi ụlọ ọrụ na -ekwu na ha ga -eji mmasị na -ele ka esi etinye nha a n'ala.
Nkebi nke 13 nke Iwu Iwu 2010 Iwu na -ekwu maka "mmachibido ụfọdụ omume na ihe omume na ebe ndị njem, mpaghara na ebe ndị njem," nke machibidoro ịtụgharị, ịrịọ arịrị na ịgha ụgha maka ire ere na ma ọ bụ gburugburu ebe ndị njem.
Ọ bụ ezie na steeti ahụ na -enweta ọtụtụ ndị njem si ebe dị anya na ndị dị nso ịhụ ọtụtụ ebe nkiri na ihe ncheta eke, a na -enwekarị mkpesa na ndị na -ere ahịa na ndị na -ere ahịa na -aghọgbu ha, na -ahapụ echiche na ahụmịhe adịghị mma. Karịsịa, a na -enwewanye mpụ nke ụmụ nwanyị na -eme ka ndị njem si mba ọzọ gaa ezumike n'ebe ọzọ.
Rajasthan abụwo onye ọsụ ụzọ na njem nlegharị anya nke nwere ọmarịcha ọdịbendị na eke, yana nka na nka. Agbanyeghị, n'afọ ndị na -adịbeghị anya, steeti dịka Madhya Pradesh, Kerala, na Goa ewepụtala echiche ọhụrụ na na -eme atụmatụ ịrata ndị njem.
Mgbidi na obí eze nke onye isi ala nke nwekwara ihe nketa, enweghị nha, mana nke ahụ agaghị adị mkpa ma ọ bụrụ na steeti enwetala aha ọjọọ n'ihi na ụfọdụ atụrụ ojii na -emebi aha steeti.
A ka ga -ahụ anya etu ihe ọhụrụ a ga -esi kwụsị omume ọjọọ.